ओम्स्क मेट्रो। निलम्बित किन निर्माण गरिएको छ?
ओम्स्क - एक विशाल औद्योगिक शहर। उहाँले 1979 मा "millionika" भयो फिर्ता। यो विचार ओम्स्क मेट्रो सिर्जना गर्न भनेर त थियो। तथापि, योजना को embodiment धेरै वर्ष फैलियो।
त्यसैले, यो सबै ट्राम लाइनहरू थाले। तिनीहरूले अन्तिम शताब्दीको मध्य 30-एँ मा सुरु भयो। सोभियत समयमा, परिवहन यस प्रकारको सक्रिय विकसित छ। ठूलो माग, विशेष गरी कारण वैकल्पिक तरिका को कमी मा जनसंख्या बीच शहर वरिपरि प्राप्त गर्न।
को XX सताब्दी को दोस्रो आधा मा, कार को गति वृद्धि गर्न नयाँ प्रविधि। उदाहरणका लागि, 1977 मा बाटो मा उच्च गति आन्दोलन संग यात्री मार्ग №2 खुलेको छ। तथापि, 1979 मा नागरिक को संख्या आधिकारिक 1 लाख मान्छे नाघ्यो। जमीन रेल परिवहन मान्छे को आवश्यकता पूरा भएनन् छ।
स्थानीय अधिकारीहरूले र आयोग अनुसन्धान सञ्चालन गर्न थाले र बैठक ओम्स्क मेट्रो निर्माण गर्न छ, र नयाँ संचार आवश्यकतालाई बारेमा प्रमाण आधार सङ्कलन गर्न थाले। मास्को विशेषज्ञहरु को मद्दतले 2000 सम्म जटिल को निर्माण को लागि एक योजना तयार गरेको थियो।
तर स्वतन्त्र ओम्स्क यस्तो मोटा काम उतरदायित्व लिनु सकेन। जोडदार गतिविधि एसआई मार्फत Manyakin - ओम्स्क मा कम्युनिस्ट पार्टी क्षेत्रीय समिति को पहिलो सचिव - परियोजना एक राष्ट्रव्यापी स्तर मा शुरू भएको थियो र मास्को देखि कोष प्राप्त गरेको छ। ओम्स्क मेट्रो को समन्वय र अनुमोदन सबै प्रक्रियाहरु मार्फत जाँदै को फलस्वरूप हामी 1990 मा निर्माण सुरु भएको थियो।
प्रारम्भिक योजना वर्ष को केन्द्रीय भाग र औद्योगिक क्षेत्र को भूमिगत टनेल चक्रवृद्धि थियो। तसर्थ, लाइन 8 अंक, "यांत्रिक ईन्जिनियर" को "बाँया-बैंक" गर्न स्टेसनबाट सही बैंक मा समावेश हुनेछ को Irtysh नदी को। काम commencement को अवधि कारण देशमा राजनीतिक परिवर्तन र संकट को शुरुवात गर्न ढिलाइ भएको थियो।
नयाँ सरकार अन्तर्गत वस्तु
ओम्स्क मेट्रो निर्माण गर्न आवश्यकता मा 1990 को अन्त्यमा सरकार पुन: विचार र काम विभिन्न स्तर मा तैयारी मा जारी। 1993 मा, प्रत्यक्ष निर्माण थाले। तर, गरिब वित्त गर्न सुरुङको निर्माण बाहिर बिस्तारै गरियो, र पूरा मिति voiced छैन।
योजना को पहिलो परिवर्तन
बिस्तारै, शहर मा स्थिति परिवर्तन भएको छ। धेरै कारखानों समारोह भएनन्। अन्य मुख्य निर्देशन मा लोड वृद्धि। तसर्थ, भूमिगत उपयोगिता को नयाँ योजना 1997 मा प्रस्तावित भएको थियो। उहाँले एक मेट्रो पुल निर्माण सुझाव र Irtysh नदी बायाँ बैंक मा स्टेशन बुकमार्क।
निर्माण ओम्स्क मेट्रो गभर्नर LK व्यक्तिगत नियन्त्रणमा थियो Polezhaeva। आफ्नो उर्दी अंक पौधे को "पुस्तकालय तिनीहरूलाई मा" लाल रोड "," वास् को Boulevard "र" बस "बाट पुन: नामकरण गरिएको छ। रूप Pushkin "," क्रिस्टल "," द गिरजाघर "। उहाँले सुरूवात गर्मी 2008 मा कार मा हुनेछ भनी रिपोर्ट
सफलताको र असफलता
रेल र कार को आन्दोलन को लागि पुल कार्यका लागि तयार थियो र यो भनिन्थ्यो 2005. मा कार लागि खुला छ "विजय को 60 औं वार्षिकोत्सव।" को डामर तह अन्तर्गत कार सार्न दुई तरिकाहरू छन्। यो बिन्दुमा, अर्को साइटमा, सुरुङको ड्रिलिंग को व्यस्त अघि लागि जटिल, पुल लगियो र स्टेशनमा डूब थाले थियो "Zarechnaya।"
अवधि मात्र स्टेशन को सही बैंक मा मरम्मत पूरा गर्न व्यवस्थित राख्न। किनभने प्रकोप को 2008 को संकट को , मेट्रो ओम्स्क अधूरा देखियो। परियोजना को लागि धन एक ठूलो कमी सेन्ट पीटर्सबर्ग मा कार्यालय सबैभन्दा ठूलो खानी कम्पनी "Sibneft" ( "Gazprom Neft") सार्दा जडानमा स्थान लियो।
मई 2008 मा, 70 सेमी को लाइन मा बाक्लो ruptured। फलस्वरूप, काम सञ्चालन लागि भर सुरुङको र सबै उपकरण को भाग। प्रविधिलाई रिकभरी मा धेरै हप्ता लाग्यो। थप काम बिस्तारै गरियो। एक वर्ष पछि, पहिलो लाइन को रूप मा ओम्स्क को भूमिगत शहर मात्र एक चौथाई तयार थियो।
फोहोर र संरक्षण को कमी
नयाँ दशक को सुरुमा पनि निर्माण सक्षम पर्याप्त रकम छैन। संघीय सरकार पैसा आवंटित छैन, र शहर सरकार उचित अवस्था मा पहिले नै निर्माण वस्तु मात्र समर्थन गर्न सक्छ। शहर आर्थिक विकास मन्त्री Elvira भ्रमण पछि Nabiullina ओम्स्क काम को बहाली लागि 1 अरब rubles प्रतिज्ञा थियो।
लागत कम गर्न, स्टेशन र रेल को व्यवस्था को लागि नयाँ विकल्प को एक नम्बर प्रस्तावित गरिएको छ। त्यसैले, हामी सफलतापूर्वक embarking र यात्रु disembarking लागि छोटो मंच विकास गरेका छन्। , मानक 102 मिटर सट्टा समाधान वाहनो5मा गणना, 60 मिटर लामो पट्टी, conveyance को गणना तीन तत्व संरचना विकास।
साथै, रेल को पूर्वानुमानित परिचय स्वतः चालक बिना सार्दा। र विशेष टर्मिनलहरु लागू गर्न जा टिकट को लागि बिक्री। यी उपाय कर्मचारी को एक ठूलो संख्या मर्मतसम्भार कम थियो।
2011 कार स्टेशन गर्न "क्रिस्टल" बाट टनेल गर्न धकेल्नु थियो समय मा को गर्मी मा काम पुन: सुरु "Zarechnaya।" राज्यपाल LK स्टेशन "पुस्तकालय तिनीहरूलाई मा एक पैदल पार निर्माण सञ्चालन त्यहि समयमा शरद ऋतु 2015 - Polezhaev वस्तु लागू लागि नयाँ म्याद घोषणा। रूप 2011 को शरद ऋतु मा सार्वजनिक प्रयोगको लागि खोलिएको थियो जो Pushkin ",
तथापि, धन चाँडै समाप्त विनियोजन। काम पहिलो धीमा भएको थियो र त्यसपछि पूर्ण निलम्बित ओम्स्क मेट्रो निर्माण गरियो। 2012 मा, DA मेदभेदेभ, रूसी संघ को अध्यक्ष को रूपमा दीर्घकालीन निर्माण गर्न ध्यान आकर्षित गरे, र फेरि एक वर्ष पछि ठेकेदार खाता वित्त को एक निश्चित रकम प्राप्त भयो। तर तिनीहरूले आवश्यक भन्दा एकदम कम हुन बाहिर गरियो। वस्तुहरु को पूरा मा गतिविधिहरु अनिश्चितकालीन सौतेली गरिएको छ।
सबै नकारात्मक अनुभवहरू भए तापनि आधिकारिक संचार विकास परियोजना अवस्थित। तसर्थ, रेखा को पहिलो खण्ड को सुरू भएपछि №1 को Irtysh को सही बैंक यसको विस्तार कल्पित। त्यहाँ काम आंशिक पहिले प्रदर्शन गरिएको थियो। त्यसपछि "हवाई अड्डा" को बिन्दु गर्न नदीको बायाँ छेउमा निर्माण जारी। दोस्रो निर्देशन को क्षेत्रीय निर्माण पनि स्वीकृत भएको छ। यसलाई सही बैंक मा Irtysh गर्न समानान्तर आयोजित गरिनेछ। यो पनि योजना छ र तेस्रो लाइन निर्माण।
तर, यी सबै संभावनाहरु धमिलो छन्। बजेट शहर र क्षेत्र यस्तो विशाल संरचना उठयो गर्न सक्दैन। संघीय अधिकारीहरु मा एक दुर्लभ स्थान सक्रियता र पदोन्नति काम प्रदान, राज्य बजेट मात्र सानो इंजेक्शन प्रदान गर्दछ देखि त, प्राथमिकता परियोजनाहरूको दीर्घकालीन निर्माण विचार छैन।
क्लासिक योजना को परित्याग
बिस्तारै, को शहरी मिडिया मा मेट्रो को लाभकारी को प्रश्न छलफल गर्न थाले। गणना बिताएपछि विशेषज्ञहरु 24 अरब rubles हुनुपर्छ आधार मा जटिल को निर्माण को लागि भनेर पाएका छन्। यो रकम गर्न मोबाइल यौगिकों को मूल्य थपियो गर्नुपर्छ। तर, यो यस्तो लागत यात्री यातायात गर्दैनन् recouped छन् उल्लेख थियो।
राज्यपाल VI Nazarov उच्च गतिको ट्राम मा पहिले नै निर्माण बाटाहरू समावेश गर्न पहल लिएको छ। कम्पनी "शहर परियोजनाहरु" एक योजना बनाउन निमन्त्रणा गरिएको थियो। परिणाम दीर्घकालीन निर्माण को नयाँ अवस्थामा समायोजनका लागि तीन विकल्प प्रस्तुत। लगानीको आधारमा, ओम्स्क मा सम्पूर्ण परिवहन प्रणाली को 70% सम्म ढाक्न इरादा।
शहर बासिन्दा राम्रो निर्माण हुनेछ जब ओम्स्क मेट्रो प्रतीक्षा थकित। एकल स्टेशन संग फोटो योजनाहरु यो विषय अनन्त प्रतिज्ञा र speculations संग मान्छे को हार को एक प्रतिबिम्ब छ।
जहाँ रूस मा उच्चतम ज्याला? रूस मा उच्चतम औसत तलब
क्रेडिट को वृत्तचित्र पत्र
सामाजिक आयाम: के फरक आर्थिक प्रणाली को peculiarities छन्
क्षेत्र बेलायत: देश को अचम्मको जीवनको बारेमा रोचक तथ्य
क्लासिक आधुनिक व्याख्याहरु: कालो ज्याकेट लगाउने के बाट
बिटा-agonists: वर्णन, लागूऔषधको कार्य सूची
'Posterisan' मोमबत्ती र मलम - प्रयोगको लागि सिफारिस
कहाँ र कसरी घर रक्सी भण्डारण गर्न?
भिटामिन "Complivit फलाम": समीक्षा, संरचना
बन्ड पप: प्रभावकारी अभ्यासको एक सेट